Iindaba - Nokuba kukho umngcipheko, isikhumba esimhlophe sithandwa ngakumbi kunangaphambili
Nokuba kukho imingcipheko, isikhumba esimhlophe mhlophe sithandwa ngakumbi kunangaphambili
Ukwenza mhlophe okanye ukwenza mhlophe sisihloko esinempikiswano enkulu. Inika iindlela ezinomtsalane zokuphucula umbala wakho.
Zininzi iindlela zokwenza ulusu lube lula. Oku kubandakanya iikhrim ezizodwa zolusu kunye nonyango lwe-laser. Ngenxa yexabiso layo eliphantsi kunye nokhuseleko oluphezulu, abantu abaninzi bakhetha iikhrimu zolusu.
Ukuba ucinga ngemveliso emhlophe, kukho izinto ezithile ekufuneka uyazi kuqala. Eli nqaku lichaza ezona zinto zibalulekileyo, ngakumbi izithako.
Ukukhanyisa ulusu ngokusisiseko kubhekisa kusetyenziso lonyango olukhethekileyo okanye izinto ukuphucula okanye ukukhanyisa ithoni yolusu. Abantu basebenzisa amagama awahlukeneyo ukuyichaza, kubandakanya ukwenza mhlophe, ukukhanyisa okanye ukwenza mhlophe ulusu.
Ukuvezwa kolusu lomntu kwizinto ezininzi kunokubangela ukuba lube buthuntu. Ukwaluphala, ukungcola, uthuli, ubumdaka, imitha yelanga kunye neekhemikhali (kubandakanya nezo zikwimveliso yokhathalelo lolusu) zinokonakalisa ulusu.
Ukungondleki, ukukhetha impilo ngendlela engafanelekanga kunye noxinzelelo kunokuba nefuthe elibi kwinkangeleko yolusu.
Ezi zinto zahlukileyo zinokubangela iingxaki ezahlukeneyo, kubandakanya izangqa ezimnyama, amabala eminyaka, amabala amabala kunye namabala.
Abantu baxhomekeke kwiimveliso ezimhlophe kunye nonyango ukusombulula ezi ngxaki. Bazisebenzisa ukuphucula okanye ukubuyisela ithoni yolusu.
Ngeemveliso ezikhanyisa ulusu, ungadibanisa iindawo zesikhumba ezi-hyperpigmented kunye nombala wolusu olujikelezileyo. Ezi ndawo zibandakanya iimpawu zokuzalwa, i-moles, i-chloasma kunye neetoni.
Ukukhanya kwesikhumba yinto eyenzeka kwihlabathi liphela, nangona kukho umdla omkhulu ekukhanyeni kolusu eAfrika, Middle East nase India. Ngo-2013, kuqikelelwa ukuba ngo-2018, imveliso yentengiso yolusu olumhlophe iya kufikelela phantse kwiibhiliyoni ezingama-20 zeedola zaseMelika.
Iimveliso kunye neendlela zonyango zinokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokukhuthaza ukubonakala ngakumbi nangakumbi. Kodwa ii-brighteners ikakhulu zisebenza ngokungenelela kwimveliso ye-melanin okanye ngokunceda ukuyitshabalalisa.
I-Melanin yeyona nto iphambili edlala indima kumbala wolusu. Olu luhlobo lwepolymer emnyama. Baninzi abantu abanesikhumba esimnyama.
Umzimba womntu uvelisa lo mbala ngenkqubo yemelanin. Izazinzulu zichonge iintlobo ezimbini eziphambili zezinto kulusu nakwinwele, ezizezi: i-Eumelanin (emnyama okanye emdaka) kunye ne-pheomelanin (tyheli okanye bomvu). Uhlobo oluthile lwesikhumba luya kugqiba ithoni yalo.
Izinto ezininzi ezikhanyayo zisebenza ngokuthintela ukuveliswa kwee-pigment. Benza oku ngokunciphisa umsebenzi wee-enzymes ezithile ezinegalelo kwinkqubo. I-enzyme ephawulekayo kwi-synthesis yi-tyrosinase.
Umzimba wakho uxhomekeke kwi-L-tyrosine ukwenza i-melanin. Kwinyathelo lokuqala lemveliso ye-melanin, i-tyrosinase iguqula le-amino acid kwi-L-Dopa. Abakhanyisi bazama ukuthintela intetho, ukusebenza okanye umsebenzi wee-enzymes, ngaloo ndlela kuthintelwa ukuveliswa kwee-pigment.
Ezinye izithako kwiimveliso ezimhlophe zinokunceda ukucazulula imibala. Banceda ukutshabalalisa i-melanin esele isemzimbeni.
Abantu abaninzi bakhetha iimveliso ezimhlophe zolusu kuba abanelisekanga kukusebenzisa izinto zokuthambisa ukuze bafumane ulusu. Nokuba banakho ukuyifumana, bahlala boyika ukufumana unyango lwe-laser.
Nangona kunjalo, iimveliso ezijolise ekufezekiseni umbala ococekileyo zihlala zihlupheka ngenxa ye-rap embi. Ngokweengxelo, zibangela ezinye iingxaki ezinokubenza bangafaneleki kwaphela.
Kuthiwa uninzi lwezi mveliso lunezinto eziyingozi. Ngamanye amaxesha, kuye kwafunyaniswa ukuba ziqulathe imichiza enetyhefu enokubangela iingxaki zolusu, kubandakanya nomhlaza.
Abantu bahlala belisebenzisa eli gama “xa kusithiwa“ mhlophe ”xa bethetha ngale micimbi yezokhuseleko. Ngesi sizathu, iinkampani zihlala ziphepha ukuyisebenzisa ekuchazeni iimveliso zazo.
Ukusetyenziswa kwezithako eziyingozi kwiminyaka edlulileyo kuye kwayekisa ukuvalwa kwezithambisi zokungcolisa umbala kwamanye amazwe.
Asisiqondi ngokupheleleyo ukuba kutheni abanye abavelisi bekhetha esi sithako sinetyhefu. Ngombono wobukho bezinye iindlela ezikhuselekileyo okanye zendalo. Mhlawumbi oku kunokuba ngenxa yokufuna inzuzo ephezulu.
Apha ngezantsi sixoxa ngezinto ezithile eziyingozi, xa uziqaphela, kuya kufuneka ubeke kwangoko kukhilimu omhlophe. Uyakufumana ulwazi malunga nezithako ezikhuselekileyo ekufuneka imveliso efanelekileyo inazo.
Esi sisithako esithandwa kakhulu kubavelisi esihlala sibandakanya kwiiresiphi. Ngoku, baya besanda abantu ababaziyo ubungozi bayo, obukhokelele kwezinye iinkampani ukuba zisebenzise iinkcazo ezikrelekrele zoku, ezinje nge-mercury, mercuric ammonia okanye mercury chloride.
I-Mercury isetyenziselwe ukugcoba ulusu kumashumi eminyaka. Xa isetyenziswa eluswini, inesakhono sokucothisa ukudityaniswa kwe-melanin, ngenxa yoko inconywa kakhulu. Ukunciphisa iindleko zentengiselwano yomenzi, ixabiso liphantsi kwaye kulula ukufumana.
Ukusukela ngoko, amazwe / imimandla emininzi (kwangee-1970s eYurophu) ikuthintele ukusetyenziswa kwale mveliso ukwenza mhlophe ulusu. Le nto ivaliwe kwaye yahlelwa njenge-toxin e-United States.
Imercury inokuhlala eluswini ixesha elide, ke oko kunokubangela ezinye iingxaki. Ingabangela ukuba umbala uvele kunye nezikrelemnqa ezingeyomfuneko. Kukho iingxelo zokuba ichaphazela ukusebenza kwengqondo kwaye ibangele ukonzakala kwezintso. Xa isetyenziswa ngabafazi abakhulelweyo okanye oomama abancancisayo, inokubangela nezifo zengqondo kwiintsana
Le yenye yeearhente ezikhanyisa ulusu ezinceda ukucacisa umbala. Kucetyiswa ngokubanzi ukuba abantu abane-vitiligo bakhethe ukusebenzisa iikhrim okanye izisombululo zeengxoxo ezine-benzophenone. Esi sifo sibonakaliswa ngokukhanya kunye nemimandla emnyama esikhumbeni. Ikhompawundi inceda ukunciphisa i-pigment esikhumbeni kunye nokwenza ithoni yolusu ilingane.
Kodwa inokutshabalalisa i-melanocytes kwaye ivelise ii-melanosomes ezifunekayo kulungelelwaniso lwe-melanin. Ke ngoko, ukuyisebenzisa kunokubangela ukuba umbala ungaguquki okanye uhlengahlengiswe.
Ngaphandle kwe-vitiligo, oogqirha abacebisi ukusetyenziswa kwe-monobenzophenone phantsi kwazo naziphi na ezinye iimeko. Kodwa uya kumangaliswa kukufumanisa ukuba ezinye iinkampani ziyifaka kwizithambiso eziqhelekileyo. Iingxaki ezinokubangelwa kukusebenzisa ezo mveliso zibandakanya ukungafani nombala kunye nokwanda kokuziva elangeni.
Isixhobo esikhanyisela ulusu siyaphazamisa, ukuze ukusetyenziswa kwakho kube nefuthe elingalindelekanga kwabanye. Kuthiwa ukuba xa isetyenzisiwe, inokubangela ukuba abanye bajike ngombala kuphela.
Uyamangaliswa? Usenokuba ubungazi ngaphambili ukuba ii-steroids zinokubakho kwiimveliso ezimhlophe. Kodwa banako.
IiSteroids zinokunceda ukwenza mhlophe ulusu ngeendlela ezahlukeneyo. Enye yazo inxulumene nendlela abacothisa ngayo umsebenzi wee-melanocytes. Kodwa banokuthi banciphise ingeniso yeseli yendalo.
Nangona kunjalo, yeyona ngxaki iphambili ukuba ezi zinto ziphikisanayo azibandakanyi kukhilimu omhlophe. I-eczema kunye ne-psoriasis zizifo ezibini abathi dermatologists bazisebenzise ukunyanga. Ingxaki yokwenyani kukusetyenziswa kwexesha elide.
I-Steroids, kubandakanya i-corticosteroids, zisetyenziselwa ukunyanga izifo zolusu ezivuthayo. Umyalelo kufuneka ukuba ukhutshwe, oko kuthetha ukuba kungcono ungazifumani kwizithambiso eziqhelekileyo. Ukusetyenziswa kwexesha elide kunokunciphisa umonakalo ongapheliyo kwesikhumba.
Iimveliso ezininzi zokhathalelo lolusu ziqulathe ioyile yezimbiwa njengesithako. Umenzi uyayisebenzisa ukunceda ukuthambisa ulusu. Ikwabiza ixabiso eliphantsi kunexabiso eliphantsi kuneoyile yendalo.
Nangona kunjalo, abantu banenkxalabo malunga nokukwazi kwesi sithako ukudala iingxaki zolusu. I-oyile yamaminerali inokuvala isikhumba sakho, yenza kube nzima ukususa izinto eziyingozi. Ke ngoko, unokufumana iingxaki ezinje ngamabala kunye namaqhakuva. Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, isithako sicingelwa ukuba sinomdlavuza.
Ngokwenyani akufuneki ufumane izibonelelo zokukhanya kolusu kule nto. Parabens liqela lezilondolozo. Abavelisi ikakhulu bazisebenzisela ukwandisa ubomi beshelfu yezithambiso.
Iingxaki ezinokubangelwa sesi sithako kubandakanya ukuphazamiseka kwenkqubo yakho ye-endocrine kunye nokuzala. Kufunyenwe ukonyusa umngcipheko womhlaza.
Apha, unezithako ezithandwa kakhulu kwiimveliso zokhathalelo lolusu. IHydroquinone sisiyobisi esithintela ukuhlanganiswa kwemelanin ngokuthintela i-tyrosinase. Oku kusebenza kakhulu. Ke ngoko, ihlala ifumaneka kwizithambiso ezininzi ezenza mhlophe.
Le ayothusi njengezinye izithako eziyingozi. Kungenxa yokuba ngamanye amaxesha iingcali ziyayicebisa, ngakumbi inguqulelo yesi-2% (okanye esezantsi). Kodwa ungawachaza njani amandla enye yeekhrim ezimhlophe, ngakumbi ukuba ayichazwanga?
Ukongeza kumandla, ukusetyenziswa kwehydroquinone ixesha elide kukonyusa umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga. Inokubangela ukuvela kwesikhumba, kwimeko apho inokuhlala isigxina. Oku kunokuba nefuthe elibi kwezinye ii-enzymes ezidlala indima ebalulekileyo emzimbeni womntu.
Utywala, i-dioxane kunye ne-phthalates zezinye izithako ezinokuba yingozi ekufuneka uzibekele ingqalelo kwizithambiso zesikhumba sakho ukukhusela amabala amnyama.
Xa uthetha ngezinto zendalo, ezikhuselekileyo zokukhanyisa ulusu, uluhlu aluzukugqitywa ukuba alubandakanyi izicatshulwa zeziqhamo zesitrasi (ezinje ngeorenji kunye nelamuni). Ezi zinto ziluncedo, ikakhulu ngenxa yomxholo wazo we-vitamin C ephezulu. Kukholelwa ukuba ikhompawundi ineempawu ezenza mhlophe ulusu.
Nangona kunjalo, kuqhelekile ukuba abantu bathethe nge-vitamin C ngokubanzi ngokwembono yezibonelelo zolusu. Ikhompawundi ineempawu zokulwa ne-antioxidant kwaye inokunceda ukuthintela iimpawu zokwaluphala, ezinje ngemigca emihle kunye nemibimbi.
Isicatshulwa seCitrus sikholelwa ekubeni sinegalelo kwimveliso ye-collagen, eyimfihlelo emva kolusu oluqinileyo nolutsha. Banokuphucula ukuthungwa kolusu kunye nokukhuthaza ukukhula kweeseli ezintsha.
Esi sithako sikwabizwa ngokuba yi-vitamin B3 kwaye ihlala ifumaneka kwiimveliso zononophelo ezikumgangatho ophezulu. Esinye sezizathu zoku sisiphumo sombane esikhanyayo. Inceda ukunciphisa imveliso ye-melanin.
INicotinamide ivelisa iimpembelelo ze-antioxidant kwaye inezinto ezichasayo. Uya kufumanisa ukuba igcina ukufuma kwaye iyanceda ukwenza ulusu luthambe kwaye lithambe. Iivithamini zikwanceda ekulawuleni ukutyeba kolusu.
Xa isetyenziswa kwi-N-acetylglucosamine, ukusebenza kwale vithamini kukholelwa ukuba kuyaphuculwa.
Usenokuba ukhe weva ukuba abanye abantu bacebisa ukuba basebenzise iziqhamo (ezinje nge-mulberry, ibherberry okanye iblueberry) ukwenza mhlophe ulusu lwakho. Oku kungenxa yobukho bekhompawundi ebizwa ngokuba yi-arbutin, ekwabizwa ngokuba yihydroquinone-β-D-glucoside.
IArbutin inceda ukunciphisa imveliso yemelanin emzimbeni. Inee-isomers ezimbini: α kunye β. I-alpha isomerom izinzile ngakumbi kwaye ikulungele ngakumbi ukukhanya kwesikhumba.
Esi sithako sendalo sithathwa njengenye indlela ekhuselekileyo kwii-decolorants ezithandwayo kwiimveliso ezininzi. Xa i-tyrosinase kufuneka ithintelwe, eyona fomu inyulu yeyona isebenzayo.
Ayisiyiyo yonke into enegama elithi "asidi" eyingozi. Uninzi lwezi zinto zendalo kwaye ziluncedo. Musa ukoyika.
Iasidiic acid licandelo lerhasi kunye nezinye iinkozo, kwaye isetyenziswa kakhulu ukunyanga induna nerosacea. I-pH yayo iyafana nolusu, ke ikhuselekile kakhulu.
Abaphandi bafumanise ukuba esi sithako sinokunceda ukwenza mhlophe ulusu. Izifundo zibonise ukuba yindlela efanelekileyo yokunyanga ukutshintsha kwesikhumba. Inokukunceda ukukhusela imveliso ye-melanin.
Le molephule ye-tripeptide yinto eyaziwayo yokulwa ukuguga ekhusela ulusu kumonakalo we-oxidative. Ukukhanyisa ulusu yenye yeenzuzo ezininzi ezinxulunyaniswa nayo.
IGlutathione ikwanakho ukuthintela ukonakaliswa lilanga. Ukwenza mhlophe ulusu kuhlala kunciphisa amandla akho okukhusela ilanga. Kodwa le nto inezinto ezichasayo kwaye inokukukhusela kwimitha ye-UV.
Nangona kunjalo, iingcali zithi imolekyuli inokusebenza kakuhle xa isetyenziswa ekuhlaleni. Enye indlela yokusombulula le ngxaki kukuyisebenzisa ngokudibanisa namanye amachiza (njengevithamini C).
Njengoko sonke sisazi, amaTshayina ayisebenzisela iintlobo ezahlukeneyo zesikhumba. Izifundo zibonise ukuba izicatshulwa ezivela kwisityalo se-licorice, ngakumbi i-galapudine, zinokubangela ukukhanya kwesikhumba.
Ezi ndawo zikholelwa ukuba zikhanyisa ulusu ngeendlela ezahlukeneyo. Kodwa ikakhulu zisebenza ngokuthintela umsebenzi we-tyrosinase-mhlawumbi ukuya kuthi ga kwi-50%.
Izifundo zibonise ukuba ngenxa yokuba inokuthintela ukudityaniswa kwe-melanin, inokulwenza mhlophe ulusu ngokufanelekileyo. Yenza oku ngokuthintela umsebenzi we-tyrosinase.
Umgubo weCrystal uyimveliso ephuma kwimveliso yeerayisi ebumbeneyo, efanelekileyo kakhulu kulusu olonakeleyo nolubuthathaka. Ihlala ifunyanwa ngexesha lokuveliswa kwewayini zerayisi zaseJapan. Kuthiwa amaJapan asebenzise ixesha elide ukunyanga umbala omnyama.
Kuya kufuneka uqaphele ukuba yahlukile kwi-kojic acid dipalmitate ezinze kwiinkampani ezithile. Nangona ezinye izithako zinokunceda, ayisebenzi njenge-kojic acid.
Le yenye ye-alpha hydroxy acids (AHA) ezimbini eziye zafundwa kakhulu-enye yi-lactic acid. Ngenxa yobungakanani beemolekyuli zabo, baxatyiswa kakhulu kukukwazi kwabo ukungena kulwaleko oluphezulu lolusu.
Abantu abaninzi bayazi ukuba i-glycolic acid yinto exfoliant. Inceda ekuphuculeni amandla okuhlaziya iiseli kunye nokususa iiseli zolusu ezingalunganga okanye ezifile. Kodwa oku kungaphezulu koko.
Ngalesi sithako, unokuba nolusu olukhanyayo. Izifundo zibonise ukuba inokukunceda ukunciphisa imveliso ye-melanin emzimbeni wakho, ngaloo ndlela kukhuthazwa ithoni yolusu.
Nangona ukwenza mhlophe okanye ukwenza iblitshi kungangumba ophikisanayo, ayinguye wonke umntu onokukufumana oko. Abantu abaneengxaki zolusu (ezinje ngamabala amadala, amabala, izangqa ezimnyama kunye namacwecwe) ngokuqinisekileyo abayi koyikiswa ziingxelo ezimbi malunga nale ngxaki.
Inyani yile yokuba abantu ngokubanzi abakwamkeli ukwenza mhlophe kwesikhumba ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuba kubekho iimpendulo ezingalunganga. Inkcazo ephambili yolu hlobo lwengxaki kukuba umenzi usebenzisa izinto eziyingozi, ngokunokwenzeka ukwenza imali. Njengokuba abathengi benolwazi ngakumbi, le meko iyingozi iyatshintsha.
Njengoko ubona apha ngasentla, kukho izinto ezikhuselekileyo, zendalo ezinokuwenza umbala wakho ukhanye kwaye ube sempilweni. Kufuneka ujonge kuphela ezi mveliso phakathi kweemveliso oceba ukuzithenga. Ngaphambi kokuthenga, nceda wenze uphando ngazo naziphi na ezinye izithako esingazichazanga apha.
Ii-cookies eziyimfuneko zibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwesiqhelo kwiwebhusayithi. Eli candelo liqulethe ii-cookies eziqinisekisa imisebenzi esisiseko kunye neempawu zokhuseleko zewebhusayithi. Ezi cookies azigcini naluphi na ulwazi lomntu.